Maitiro ekuwedzera iCloud zvakanamatira muMail | IPhone nhau
Maitiro ekuwedzera iCloud zvakanamatira muMail
Vazhinji vashandisi vakasiya iyo Mail kunyorera kwechinguva, kunyanya nekuda kwekushomeka kwesarudzo. Imwe, kunyange yakakosha, inoshandiswa nevashandisi vazhinji kugona kubatanidza mafaera. Spark, Outlook, Boxer nevamwe vazhinji vanotibvumidza kunamatira mafaera kune maemail zvakananga kubva kune chero gore rekuchengetedza sevhisi, ingave iri Dropbox, OneDrive, Google Drive, Bhokisi ...
iOS 9 yakatiunzira sarudzo nyowani dzekushandisa kweMail, sezvazvinowanzoitika, asi hazvimbofi zvakafadza vashandisi avo ivo vatove vakazojairira kune zvakasiyana siyana izvo mamwe maemail vatengi vatinotipa izvo zvandataura pamusoro. Tsamba yeIOS 9 inotibvumidza isu, pakupedzisira, kunamatira mafaera kune maemail atinotumira, asi neganhuriro (zvikasadaro haizove Apple) uye ndiko kuti isu tinogona chete kunamatira mafaira atakachengeta muICloud.Uku kukamurwa, chimwe chinhu chisinganzwisisike kana Apple ikasapa yakawanda yemahara yekuchengetedza nzvimbo, kunyangwe yakadzikisa mitengo, ndiko kuremara kukuru kweichi chishandisosezvo ichiganhurirazve mashandisiro ayo. Ne5 GB yenzvimbo yemahara, hapana kana chatinogona kuchengetedza, icho chagara chakatimanikidza kuti tishandire kune mamwe marongero ehurongwa uye nekudaro kushandisa mamwe maemail ekushandisa.
Batanidza mafaera kubva kuICloud mune yeMail app
Kana tangotanga kunyora email, tinya pamusoro penzvimbo isina chinhu kweinopfuura sekondi kusvikira sarudzo dzaonekwa.
Ipapo tinobaya pamuseve wekurudyi kusvikira tasvika Wedzera zvekubatanidza.
Otomatiki iyo iCloud application ichavhura, yakavanzwa nekutadza, uye tichaenda kufolda uko iyo faira iyo yatinoda kubatanidza kune iyo email iripo.
Kana tango sarudza iyo, iyo iCloud hwindo ichavhara uye tichaona zvakanamatira mutsamba izvo zvatiri kunyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekuwedzera iCloud zvakanamatira muMail
Raul Tijerina chinobata mufananidzo akadaro
Ndatenda zvikuru, zvinobatsira ...
Pindura Raul Tijerina
Iyi ndiyo yekutanga vhidhiyo blog yakanyorwa mu4K ine iPhone 6s
Ruva goridhe iPhone 6s inosvika kumutengi mazuva matatu pamberi apo pazvaifanira